“Acoustik live” : hizara ireo hiram-pitiavana i Rija sy i Fanja | NewsMada
“Acoustik live” : hizara ireo hiram-pitiavana i Rija sy i Fanja
Fanja Andriamantena sy Rija Ramanantoanina. Mpanakanto samy manana ny toerany eo amin’ny tontolon’ny hira. Efa nifankahalala sy nifandray hatry ny ela ihany koa, ary niara-niasa tamina tetikasa maro manodidina ny zavakanto. Ao anatin’izay fifampizarana ny kanto izay hatrany ny “Acoustik live”, seho iray izay iarahan’ireto mpanakanto ireto manatontosa ny alahady 11 febroary ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny CCEsca Antanimena.
Hibahana ny hiram-pitiavana, satria izany rahateo no tena manavanana ireto mpanakanto ireto. Fanamarihana ny fetin’ny mpifankatia rahateo ny fotoana, izay hamoahana an-tsehatra indray ireo hira tena handrasan’ny mpankafy. Notsoingaina manokana ireo, raha ny nambaran’ny mpikarakara, mba hampiavaka ny seho.
Tsiahivina fa vao nanomboka kelikely teo amin’ny sehatry ny mozika i Rija Ramanantoanina, tany amin’ny taona 1980 tany, dia efa tsikaritr’i Fanja Andriamanantena ny talentany. Mametraka an’i Fanja ho zoky nitarika ary mbola manampy azy eo foana ihany koa i Rija. Anisan’ny noforonin’i Fanja ho hiran’i Rija ny “Nokajiana”, tao anatin’ilay tantara an-tsehatra “Anjomara sy bitsika”, ny taona 1990. Tsy mbola tena nisy anefa ny fotoana hoe hifampizaran’izy ireo sehatra iray manokana, ka izay no nikitika ny Gasy Events, mpikarakara ny hetsika.
Efa nomanina ela ihany koa ny seho, satria efa saika hotontosaina ny volana oktobra lasa teo izy izy, saingy nosomparan’ny pesta. Efa vonona tsara kosa izy mianadahy mpanakanto, ny mpitendry tarihin’i Samy Andriamanoro, sns.